कोरियाबाट फर्केका बागलुगका कुँवर बाख्रापालनमा करोड लगानी – Info Bazar
कोरियाबाट फर्केका बागलुगका कुँवर बाख्रापालनमा करोड लगानी
January 12, 2020by Info Baazaar0 comments
गाउँमा सम्भावना देख्ने युवा निकै कम देखिन थालेका छन् । गाउँघरमा रहेका युवा पनि अवसर नभएको भन्दै निराशाबाट ग्रसित छन् तर, दुर्गम गाउँमा यस्ता युवा पनि छन् जो युवाहरूको तीव्र विदेश पलायन देखेर पनि गाउँमै केही गर्ने दृढ अठोटमा छन् ।
तीनैमध्येका एक उदाहरणीय पात्र हुन् बागलुङको गलकोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीका कुँवर दम्पती । यो जोडीले गाउँमै करोड लगानी गरेर बाख्रापालन गरेको छ । दुदिलाभाटीका गमबहादुर कुँवर र निरु कुँवर अहिले यस व्यवसायमा लागेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका हुन् । विसं २०७४ देखि पाँच/छ वटा बाख्राबाट शुरु गरेको व्यवसाय बढेर अहिले १ सयको हाराहारीमा पुर्याएका छन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कृषि पढेर कोरिया पुगेका गमबहादुरले पाँच वर्ष विदेशमै बिताए । कोरियामा रहँदा सिकेको सीपलाई नेपालमै प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल आएका कुँवर अहिले यस पेशामा नै रमाएका छन ।
बाख्रा पालन गर्ने सोच कहाबाट आयो ?
मैले कृषि शिक्षा लिएर पढेको हु आर्थिक अवस्था मेरो निकै कमजोर भए पछी बिदेश जाने तयारीमा थिए । इपिएस कक्षाको पनि तयारी गर्दै पनि थिए । इपिएस पास गरेपछी कोरीया जाने मौका मिल्यो । ५ वर्ष कोरीयामा कृषिमा नै काम गरे । पछी नेपाल फर्किए । जागीर खान पनि भौँतारिएँ । विदेश पनि गएँ, त्यहाँ पुगेपछि धेरै देखेँ भोगेँ कृषि पढेकाले जागीरमा भन्दा व्यवसाय गर्न मन लाग्यो, गाउँघरमा घाँसको समस्या छैन, चरन र स्रोत साधनको ठूलो समस्या भएकाले गाउँमै केही उदाहरण देखाउँछु भनेर बाख्रापालनमा लागेको हूँ ।
सुरुवाती चरणमा कति लगानीबाट बाख्रा पालन सुरु गर्नु भयो ?
बिदेश वाट फ़र्किए पछी २०७४ मा ४\_५ ओटा बाख्रा बाट व्यवसाय सुरु गरे । एउटा बोयर जातको भारतबाट बोकालाई दुई लाख ५० हजारमा किनेर ल्याए । अहिले म संग दुई ओटा बोयर जातको बोका छ अनि १०० भन्दा बढी खरी जातको माउ र पाठापाठी अनि अन्य जातको बोकाहरू छन । अहिले लगभग मैले एक करोड बढी लगानी गरेको छु । बैज्ञानिक खोर दवाई चोकर इत्यादी गर्दा करौडौ रकम भेटिएको छ ।
मासिक आम्दानी कति छ ?
यति नै भन्न त सकिदैन तर व्यापार राम्रो छ । अहिले बाख्राको स्याहरे सुसारे गरी हामी कहा जम्मा ६ जना कामदार छन हामी दुई दम्पती बाहेक प्रति व्यक्ति २० हजार बढीको दरले तलव दिदै आएका छौ । चोकर दवाई खर्च गर्दा हुने आम्दानी बचत बाट पनि हामी सन्तुष्ट छौ ।
बजारीकरण कस्तो छ ?
उत्पादित बाख्रा एवं मासुको बजारीकरणका लागि कुनै पनि समस्या छैन बरु काम गर्ने जनशक्ति र इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ ।
This Page Total Views: 1,233
अबको १० वर्ष पछी बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा पुग्ने लक्ष्य छ : ब्रान्च म्यानेजर शाही
December 29, 2019by Info Baazaar
निरन्तरता नै सफलताको मार्ग हो
May 29, 2020by Info Baazaar